ဂနျဂူးဘိုငျဇာတျကားထဲက ဇာတျဝငျခနျးလေးကိုကွိုကျလှနျးလို့ ဂနျဂူးဘိုငျအတိုငျးဝတျဆငျပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ပုံရိပျတှကေိုပွသလာတဲ့ ဒီး - Media Update News
The Model Academy 2019 ရဲ့ 1st Runner Up ဆုရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Dee ကတော့ အမိုကျစား ရုပျရညျနဲ့ ဆှဲဆောငျမှု အပွညျ့ရှိတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ ။
Dee က အခုဆိုရငျ သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလမျးပျေါကို လြှောကျလှမျးနပွေီဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးတဈခုပျေါကို ရောကျရှိလို့နပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ အသဈအဆနျးတှကေို
အမွဲတမျးစိနျချေါလရှေိ့တဲ့ ဒီးက ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမရဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ ထူးထူးဆနျးဆနျး ဓာတျပုံရိုကျကူးမှုလေးတဈခုကို ခပြွလာပါတယျ ။ ဒီးက “Gangubai Kathiawadi
ကားကွညျ့တုနျး ဒီအခနျးလေး ရိုကျခငျြတယျပွောလို့ Niki Roy က ဒီတေး စီစဉျ Si Thu Kyi Yan က လိမျးခှဲ Aw Ya Tha Soe က ရိုကျခပြေးထားပါတယျ ဝတျစုံကတော့ Karambir – Indian Fashion Collection ကပါ ….
အားလုံးလဲ Ganguu ရဲ့ Look လေးကိုကွညျ့ပွီးသဘောကလြိမျ့မယျလညျး ထငျပါတယျ. Dee တို့တှလေညျး Ganguu တို့လို Prostitute တှကေို လူတှထေဲကလူတှအေနနေဲ့ ဆကျဆံပွီး သူတို့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုလေးတှကေို
လကျခံလိုကျကွရအောငျနျော .🤍” ဆိုပွီး နာမညျကွီးအိန်ဒိယဇာတျကား Gangubai Kathiawadi ထဲက ဇာတျဝငျခနျးလေး အတိုငျး ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ဒီကတော့
နာမညျကွီးဇာတျဝငျခနျးလေးကို ကွိုကျလှနျးလို့ ဒီဇာတျဝငျခနျးလေးအတိုငျး ရိုကျကူးပွီး ပွညျ့တနျဆာမိနျးကလေးတှရေဲ့ ဘဝကို နားလညျလကျခံပေးကွဖို့ပါ တိုကျတှနျးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
Source: Dee – ဒီး’s fb
ဂန်ဂူးဘိုင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့ ဂန်ဂူးဘိုင်အတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသလာတဲ့ ဒီး
The Model Academy 2019 ရဲ့ 1st Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dee ကတော့ အမိုက်စား ရုပ်ရည်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် ။ Dee က အခုဆိုရင် သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလမ်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကို ရောက်ရှိလို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်အဆန်းတွေကို အမြဲတမ်းစိန်ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ဒီးက ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုလေးတစ်ခုကို ချပြလာပါတယ် ။ ဒီးက “Gangubai Kathiawadi ကားကြည့်တုန်း ဒီအခန်းလေး ရိုက်ချင်တယ်ပြောလို့ Niki Roy က ဒီတေး စီစဉ် Si Thu Kyi Yan က လိမ်းခွဲ Aw Ya Tha Soe က
ရိုက်ချပေးထားပါတယ် ဝတ်စုံကတော့ Karambir – Indian Fashion Collection ကပါ …. အားလုံးလဲ Ganguu ရဲ့ Look လေးကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလိမ့်မယ်လည်း ထင်ပါတယ်. Dee တို့တွေလည်း Ganguu တို့လို Prostitute တွေကို လူတွေထဲကလူတွေအနေနဲ့ ဆက်ဆံပြီး သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုလေးတွေကို လက်ခံလိုက်ကြရေ
အာင်နော် .🤍” ဆိုပြီး နာမည်ကြီးအိန္ဒိယဇာတ်ကား Gangubai Kathiawadi ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး အတိုင်း ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကတော့ နာမည်ကြီးဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းလေးအတိုင်း ရိုက်ကူးပြီး ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝကို နားလည်လက်ခံပေးကြဖို့ပါ တိုက်တွန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article လုပျခငျြတာရှိလို့ အမကေိုအမြိုးမြိုးမကျြနှာခြိုသှေးပွနတေဲ့ Pilar လေးရဲ့ပုံလေးကိုဗီဒီယိုရိုကျပွီးပွသလာခဲ့တဲ့ ခမျြးခမျြး
Next Article သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျကို သူမမှေးနမှေ့ာ ပရိတျသတျအတှကျလကျဆောငျပေးလိုကျတဲ့ မလေသံစဉျ